Fomba fanao tsara indrindra hampiharana ny fanarahana antso an-tariby manerana ny paikadinao amin'ny varotra | Martech Zone
Fomba fanao tsara indrindra hampiharana ny fanarahana antso an-tariby manerana ny paikadim-barotrao
Alakamisy, Jolay 9, 2015 Friday, May 21, 2021 Lance Weatherby
Antso fanenjehana dia haitao efa niorina amin'izao fotoana izao izay miaina amin'ny fitsanganana indray. Miaraka amin'ny fiakaran'ny finday avo lenta sy ny mpanjifa finday vaovao dia lasa manintona kokoa ny mpivarotra maoderina ny fahaizany tsindrio. Io fitaritana io dia ampahany amin'ny antony mahatonga ny fiakarana 16% isan-taona amin'ny fampiakarana antso ho an'ny orinasa. Saingy na eo aza ny fitomboan'ny antso sy ny dokam-barotra amin'ny finday dia maro ireo mpivarotra no mbola tsy nitsambikina tamin'ny fanarahana tetika mahomby amin'ny marketing ary very antoka amin'ny fomba fitifirana ity zana-tsipìka manan-danja ity ao anaty tranon'akanjo marin-tsaina.
Ny ankamaroan'ny mpitarika indostria dia manandrana mamaly ny fanambin'ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny fahitana bebe kokoa momba ny dokam-barotra na tsia. Saingy tsy misy vahaolana manakaiky ny fahafaha-mividy, ny fidirana ary ny fampiasana mora omena ireo sehatra fanaraha-maso antso maoderina. Raha mikasika ny fampiharana ny fanaraha-maso ny antso amin'ny tetikady marketing, ny orinasa dia tokony hitadidy ireo fomba fanao tsara indrindra ireo mba hamakafaka kokoa ny metimety momba ny varotra sy hamoahana hevi-baovao misy dikany:
Araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny Shop.org sy Forrester Research, The State of Retailing Online, ny fanatsarana finday no laharam-pahamehana indrindra amin'ireo mpivarotra am-pivarotana. Ny fitomboan'ny fiankinan-doha amin'ny mpanjifa amin'ny fizahana finday dia nitarika fitomboan'ny habetsaky ny antso anaty, nahatonga ny fanarahana antso ho singa lehibe iray amin'ny tetikadin'ny mpivarotra dizitaly. Satria ny finday avo lenta izao no fomba hahazoana manoloana ireo vonona ny fifanakalozana mpanjifa, ny fanatsarana ny tranonkalanao finday dia dingana lehibe iray mankany amin'ny fampiharana ny fanarahana antso.
Fanaraha-maso ambaratonga fanentanana
Amin'ny alàlan'ny fanendrena nomeraon-telefaona tsy manam-paharoa azo zahana isaky ny fampielezana marketing, ny serivisy fanarahana antso dia afaka mamaritra hoe loharano iza no mitondra ny antsonao. Ity haavon'ny fahitana ity dia ahafahan'ny orinasa mahafantatra izay doka amin'ny sora-baventy, takelaka fanaovana doka, fampielezan-kevitra sosialy na dokambarotra PPC nahasarika ny mpanjifa niantso azy ireo. Ny Click-to-call CTA (Calls To Action) dia mampahatsiahy antsika fa ny fitaovana tazonintsika eny am-pelatanantsika dia mbola finday ihany, afaka mampifandray antsika vetivety amin'ny olona iray ao amin'ny orinasa jerentsika.
Teny lakile sy Marketing amin'ny data
Ny marketing amin'ny milina fikarohana (SEM) dia manohy mandray ny ampahany betsaka amin'ny fandaniana amin'ny marketing an-tserasera. Sahala amin'ny fanarahana antso an-tariby, ny fanarahan-dia amin'ny haavo teny fanalahidy dia mamorona nomeraon-telefaona tokana isaky ny loharano teny fanalahidy ao anaty karoka, ahafahan'ny orinasa mivezivezy amin'ny haavon'ny teny fikarohana manokana ary mampifandray ireo antso amin'ireo mpitsidika tranonkala manokana sy ny fihetsik'izy ireo eo amin'ilay tranonkala. Ny marketing amin'ny alàlan'ny angona dia singa iray tena ilaina amin'ny orinasa mitady hanitatra ny fantsom-barotra amin'ny sehatra nomerika. Na dia mihevitra aza ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika fa hahazo fahitana amin'ny alàlan'ny tranonkala izy ireo Analytics irery, matetika izy ireo dia tsy mijery ny herin'ny antso an-tariby manan-danja indrindra.
Fampidirana CRM & Analytics
Mampifandray antso an-tariby Analytics dia iray amin'ireo fomba lehibe ahazoan'ny orinasa fahazoana hevi-baovao momba ny marketing. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny vahaolana amin'ny fanarahan-dia ataon'izy ireo amin'ireo rindrambaiko misy azy ireo ankehitriny, ny orinasa dia manana sehatra iraisana sy matanjaka kokoa Analytics manararaotra. Rehefa jerena miaraka amin'ny Internet ny angona Analytics, orinasa dia afaka mahazo fomba fijery feno momba ny volan'ny dokam-barotra, mamela azy ireo hahita izay mandeha ary manamboatra na manafoana izay tsy. Ireo fomba fijery ireo dia manampy ny orinasa hampihena be ny vidiny isaky ny mitarika, hanova ny antso ho lasa mpitarika mahay ary hampitombo ny ROI amin'ny ezaka ara-barotra.
At CallRail, fanaraha-maso antso ary Analytics sehatra, izahay dia manampy ny tompona orinasa hahita izay fampielezan-kevitra amin'ny marketing sy teny lakile fikarohana izay mitondra antso an-tariby sarobidy. Ny mpanjifanay National Builder Supply dia nampihatra ny serivisinay fanarahana ny antso ary afaka nanidy ny fandaniana dokam-barotra PPC 60% nefa mbola mitazona ny haavon'ny varotra mitovy aminy ihany. Ilay orinasa koa dia nahavita nisarika vokatra tsy mandeha amin'ny laoniny noho ny paikadim-barotra azon'izy ireo tamin'ny alàlan'ny CallRail.
CallRail dia tena nanao ny tsy fitoviana taminay. Manana sary mivaingana momba ny varotra, ny fidiram-bola ary ny famaritana ny margana aho izao. Tsy manome ny tombontsoan'ny fisalasalana intsony aho amin'ny fanaovana doka tsy mahomby; Azoko esorina fotsiny ny fandaniana. CallRail dia nanome anay ny fampahalalana farany nilainay hanatanterahana izany. David Gallmeier, Marketing ary fampandrosoana ho an'ny NBS
Ny fanaraha-maso ny antso dia voaporofo fa zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa, ny fiofanana anatiny, ny marketing amin'ny alàlan'ny angon-drakitra ary ny fanapahan-kevitry ny taranaka. Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fanarahana ny antso amin'ny paikadin'ny varotra ataon'izy ireo, ny orinasa dia afaka manampy amin'ny fanakatonana ny loop'ny ROI raha tsy manapotika ny banky. Ny fanaraha-maso antso dia afaka manampy ny orinasa hanomboka hifantoka amin'ny fampielezan-kevitra ara-barotra izay miasa - ary atsahatra ny fandaniam-bola amin'izay tsy mahomby.
Atombohy ny fitsarana anao CallRail maimaim-poana
Tags: fanaraha-maso antsocallrailfanaraha-maso antso fanentananafanaraha-maso antso avo lentamarketing data-drivenfanaraha-maso antso teny lakilefanaraha-maso ny antso an-tariby
Lance Weatherby dia filoha lefitry ny varotra sy ny varotra ao CallRail. Manana faniriana mafy hanangana orinasan-tserasera mifantoka amin'ny mpanjifa sy rakitsoratry ny zava-bita izy. Nanompo ho Startup Catalyst miaraka amin'ny Advanced Technology Development Center ao amin'ny Georgia Tech izy ary nitana ny toeran'ny asa fampandrosoana, marketing ary fitantanana ankapobeny amin'ny nCrowd, CipherTrust, EarthLink, ary MindS spring.
Raha manompo an'arivony taona ianao dia tsara kokoa ny manompo horonantsary
Stamplia: Mividiana na manamboara modely mailaka mora foana
Sep 9, 2015 amin'ny 11: 10 AM
Manaiky aho. Ny fanarahana antso dia fitaovana marketing lehibe. Nampiasa ny rafitra fanaraha-maso antso an'ny Ringostat izahay. Fantatsika izao hoe iza amin'ireo fantsona fanaovana dokam-barotra no manome ny ankamaroan'ny fidiram-bolantsika sy ny fandaniam-bola. Ny zava-bitan'ny ekipa fivarotantsika dia nahazo tombony ihany koa tamin'ny endri-peo firaketana ny antso. Amin'ny ankapobeny, faly izahay amin'ity rindrambaiko ity.